လို့ပြောကြတော့၊မားမားဆုံးတာကိုအိမ်မက်မက်နေသလိုဖြစ်နေတဲ့ကျွန်မဟာယောင် တောင်တောင်နဲ့မားမားများထွက်လာပြီးသမီးပြန်လာပြီလားလို့မေးလေမလားလို့အိမ် ထဲကိုရှာနေမိပါတယ်။တရားကိုမြတ်မြတ်နိုးနိုးအားထုတ်ကြတဲ့ကျွန်မတို့မိသားစုဟာ သေခြင်းတရားရဲ့နောက်မှာဘာတစ်ခုကိုမှအကျယ်မချဲ့လိုကြပါဘူး။ကျွန်မတို့ပြန်ရောက်
ခဲ့ပါတယ်။သံဃာတော်များကိုသင်္ကန်းကပ်လှူချိန်မှာမားမားနာမည်ကိုရွတ်ပြီးအမျှ ဝေရပါတယ်။တရားသဘောကိုဆင်ခြင်နေပေမဲ့ကျလာတဲ့မျက်ရည်တွေကိုကျွန်မ ဘယ်လိုမှမထိန်းနိုင်တော့ပါဘူး။မားမားမျက်နှာကိုအထပ်ထပ်အခါခါကြည့်နေရင်း
Posted by မြန်မာပြည်ကိုလွမ်းတယ် at 09:20
မော်စီ 30 May 2008 at 11:15
မေရေ မေရဲ့စိတ်ဓါတ်ကို အရမ်းပဲလေးစားမိပါတယ်။ မိခင်နေမကောင်းနေတဲ့ကြားက ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက် သွားရောက်ကူညီ ကယ်ဆယ်နိုင်တဲ့စိတ်ဓါတ်ကို ဂုဏ်ယူမိပါတယ်ဗျာ။ နောက် မေတို့ မိသားစုရဲ့ စိတ်ထားတွေးကိုလည်း ကျနော် မလေးစားလို့ မနေနိုင်လောက်အောင်ပါပဲ။ မေရဲ့မိခင်ဆို နေမကောင်းလို့ အိပ်ယာမှာလဲနေတာတောင်မှ ဒုက္ခရောက်တဲ့ ပြည်သူတွေအတွက် စေတနာတွေထက်သန်နေတုန်းပဲနော်။ ကျနော်ဒီပိုစ့်ကိုဖတ်ပြီး စစ်အစိုးရကို ပိုပြီးတော့တောင် စိတ်နာမိတယ်။ တော်ပြီးဗျာ စစ်အစိုးရအကြောင်းမပြောချင်တော့ဘူး ရင်နာလွန်းလို့ပါ။ ကိုယ်ကျိုးကိုမကြည့်ပဲ အများကျိုးကိုသယ်ပိုးနေတဲ့ မေကို မေရဲ့မိခင်က ကောင်းရာဘုံကနေ ကျေနပ်နေမှာပါ။ မေရဲ့ မိခင် ကောင်းရာသုကတိလားပါစေဗျာ။
တာတူး 30 May 2008 at 11:43
မေရေ တကယ်ကို စိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာ။ မေ့ အတွက် မေ့ မားမားက ဂုဏ်ယူကြေနပ်နေမှာပါ။ မေ ရဲ့ မားမား ကောင်းရာသုဂတိလားပါစေဗျာ။
ရွှေပြည်သူ 30 May 2008 at 11:52
ပြောစရာစကားလုံးတောင် ရုတ်တရက် ရှာလို့မတွေ့ဘူးမေရယ်... ဒီလိုအဖေ ဒီလိုအမေက မေ့လိုသမီးမျိုး မွေးထုတ်ခဲ့တာ အံ့သြစရာတော့ မဟုတ်ပါဘူးလေ။ အကြီးမားဆုံး စွန့်လွှတ်မှုနဲ့ အလှူသွားလုပ်ခဲ့တဲ့ မေ့ကိုရော မေ့အမေကိုပါ သိပ်ကိုလေးစားမိကြောင်း လေးလေးနက်နက် ပြောချင်ပါတယ်။ မေ့အမေလည်း မေ့အတွက် ဂုဏ်ယူကျေနပ်သွားမှာပါ။ ကောင်းရာသုဂတိလည်း လားမှာသေချာပါတယ် ... ငြိမ်းချမ်းပါစေ သူငယ်ချင်း...
အောင်သာငယ် 30 May 2008 at 12:33
ညီမရေ ညီမပြောသလို -ဘ၀တူတွေ ဖြစ်သွားပြီ အကိုရဲ့-ဆိုတဲ့စကားကို အမှန်တကယ် မကြားလိုတာပါကွယ်။ ညီမစာကို ဖတ်ရတာ အကိုလည်း မျက်ရည်လည်တယ်။ ဘ၀တူတွေမို့ပါပဲ၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ညီမပြုခဲ့တဲ့ ကုသိုလ်တွေအတွက် အမေ ၀မ်းသာသွားတာပဲ။ တခုပါပဲ လေးစားစရာ ကောင်းတဲ့ စံပြ အမေတွေကို တို့တွေ ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရတာ ၀မ်းနည်းစရာ ကောင်းလှတယ်။ ဒါပေမယ့် ၀မ်းနည်းရုံနဲ့ မပြီးသေးဘူး သူတို့ ပြသွားတဲ့ လမ်းကို တို့တွေ ဆက်ပြီး လျှောက်ကြရဦးမယ် မဟုတ်လား။ ငြိမ်းအေးမှု ရပါစေ ညီမရေ။
win zaw 30 May 2008 at 13:08
ထပ်တူထပ်မျှ ၀မ်းနည်းရပါတယ်၊ အင်းတင်းထားပါ..
Kay 30 May 2008 at 13:17
၀မ်းနဲ ကြောင်း နဲ့..ဂုဏ်ယူ ကြောင်း..ထပ်တူ ပြော ပါရစေ။ ကိုအောင်သာငယ် ဘလော့က..တွေ့လို့ လာ နှုတ် ဆက်တာပါ။ ခင်မင် လျက်-
မောင်အညတရ 30 May 2008 at 13:53
မမေရေ.... တနေ့နေ့မှာ ဒီသတင်းသေချာပေါက်ကြားရမယ်ဆိုတာ သိနေပေမယ့် တကယ်ကြားရတော့ ရင်ထဲ ဆို့သွားတယ်။ စိတ်မကောင်းဘူးဟာ။ မမေ ကျွန်တော့်ထက် စိတ်ခိုင်တာကိုတော့ အထင်ကြီး လေးစားမိတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ နောက်ဆုံးထွက်သက်က အရမ်းအရေးကြီးတယ်လေ။ နောက်ဆုံးအချိန်မှာ မမေရဲ့ မားမားက ဒုက္ခအတိရောက်နေတဲ့ လူတွေကို လှူဖို့ စိတ် ညွှတ်သွားတာဆိုတော့ သေချာပါတယ်သူ........
Anonymous 30 May 2008 at 18:17
အဖြစ်အပျက်က တစ်ကယ်လား အစ်မ၊ တကယ်ဆိုရင်တော့ အရမ်းလေးစားပါရဲ့ဗျာ
ဖုန်း မြင်. 30 May 2008 at 23:24
ညီမလေး ....စကားလုံးတွေရုတ်တရက် ရှာမတွေ.ဘူး ကွယ် ၊လူတစ်ယောက် ရဲ.နောက်ဆုံးခရီးကို ညီမလေးတို. အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပေးနိုင်ခဲ.တယ် ။
ညီမလေး မေမေ ကောင်းရာသုဂတိ လားပါစေ ...
ကိုယ်ကျိုးထက် အများအကျိုးကို သယ်ပိုးထမ်းရွက် နိုင်ခဲ.တဲ. ငါတို.ညီမလေး ရဲ. လုပ်ရပ်တွေကို ညီမမေမေ
ကျေနပ် ဝမ်းသာ နေမှာပါ .......
lotto 649 numbers 31 May 2008 at 10:55
Ko Boyz 31 May 2008 at 16:00
၀မ်းနည်းကြောင်းနဲ့ ဂုဏ်ယူမိကြောင်းကိုပဲ ပြောကြားလိုပါတယ်...။
ဒီဇင်ဘာနှင်း 31 May 2008 at 21:21
မမေရေ အစ်မလိုစိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ မိန်းကလေးဖြစ်အောင် လေ့ကျင့်ရဦးမယ် လေးစားပါတယ် မမေ မားမား ကောင်းရာသုဂတိရောက်ပါစေ
Anonymous 1 June 2008 at 11:16
I am deeply sorry to hear about your mother. May she rest in peace. I was so far away from home when my father passed away. I am really proud of you for what you are doing for our fellow country men. You are my hero. Keep up your good work. May God bless you abundently!
JulyDream 1 June 2008 at 15:10
ကောင်းရာမွန်ရာ ဘုံဘ၀မှာ အေးချမ်းသာယာပါစေလို့ တောင်းဆုချွေပါတယ် ခင်ဗျာ။ အပူသောကတွေ ကြားမှာ နောက်တစ်ပူ ထပ်တိုးပေမယ့် တရားသဘောနဲ့ ဆင်ခြင်နိုင်မှုကို အားကျ လေးစားမိပါတယ်ဗျာ။
Nyein Chan Aung 1 June 2008 at 21:37
မေမိုးမခ3June 2008 at 21:17
မမေရဲ့ မားမားက မမေကိုခွင့်လွတ်ပေးမှာပါ မမေက ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ ပြည်သူတွေကို ကူညီတဲ့အချိန်မှာ မမေရဲ့ မားမားက လောကကြီးကို စွန့်သွားတော့ ဘယ်တတ်နိုင်ပါမလဲ ဒါက လောကကြီးကပေးတဲ့ နိယာမတရားတွေပါဘဲ။ မေမိုးလဲစိတ်မကောင်းမိဘူး။ အစ်မတစ်ယောက်လို အရမ်းချင်တဲ့လူ ဒီလို အဖြစ်အပျက်တွေကြုံတော့ စိတ်မကောင်းမိတာ အမှန်ပါဘဲ။ မေမိုးဆုတောင်းပေးပါတယ် မမေရဲ့ မားမား ကောင်းရာသုဂတိကို လာပါစေလို့။ မမေလဲ လူမှုရေးတွေ ဒီထက်ပိုဆောင် ရွက်နိုင်ပါစေ လို့ ဆုတောင်းပါတယ်။ မေမိုးလာတာနောက်ကျလို့ ခွင့်လွတ်ပေးပါ။
မေငြိမ်6းJune 2008 at 21:04
မေ..မေတို့ မိသားစုရဲ့ ခိုင်ကျည်လှတဲ့ စိတ်ဓါတ်ကို လေးစားပါတယ်၊ သူ့ရဲ့ စေတနာမေတ္တာနဲ့ မေတို့ရဲ့ စေတနာတွေ အကျိုးဆက်ကြောင့် မေ့မားမား ကောင်းရာသုဂတိလားမှာ အသေအချာပါ..။
Anonymous 21 January 2009 at 11:20
I was browsing through MM blog dictory and I read your post about your mom. I am so sorry for your lost.
We have same satiation here. I can feel your sadness. My mom was passed away5months earlier than yours. Same, Cancer killed my mom.
I was in overseas while she passed away. I cried every night. I do not know how to heal the sadness until now.
same 16 May 2009 at 00:18
KyiYin 20 June 2009 at 05:00
yes sister,u r really great daughter for ur mother,it make me cry and ur post is reminding about life is nothing,i want to type in myanmar but i dont know how to type myanmar,I wish u to be peaceful all of ur life